निष्ठापूर्ण राजनीतिका अथक योद्धाप्रति श्रद्धाञ्जली | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / निष्ठापूर्ण राजनीतिका अथक योद्धाप्रति श्रद्धाञ्जली
निष्ठापूर्ण राजनीतिका अथक योद्धाप्रति श्रद्धाञ्जली
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय March 4, 2019	0 59 Views
नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट गठन भएको कम्युनिष्ट पार्टीको अल्पमतको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको निधनले मुलुकले एक निष्ठावान् एवं भिजन भएको जनमुखी नेता गुमाएको छ । अधिकारीको निधनसँगै यतिबेला धेरै मानिसहरुले उहाँमा रहेको उच्चस्तरको सुझबुझ, क्षमता र ग्रामीण विकासमुखी दृष्टिकोणको प्रशंसा गरिरहेका छन् । स्व. अधिकारीले आफू अर्थमन्त्री हुँदा मुलुकलाई नयाँ दिशानिर्देश गर्नुभएको थियो । तत्कालीन कम्युनिष्ट सरकारको सफलताको श्रेय पाउने अग्रणी नेतामा स्व. अधिकारी पर्नुहुन्छ । अधिकारीको निधन राष्ट्रको लागि ठूलो क्षति हो । यस दुःखद घडीमा हामी उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं ।
तत्कालीन अल्पमतको सरकारले शुरु गरेका लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुपका कामहरुले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेका छन्, यसको प्रमुख श्रेय उहाँलाई नै जान्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत त्यसबेला बृद्धबृद्धाहरुलाई दिइएको एकसय रुपियाँ भत्ता अहिले बढेर दुई हजार पुगेको छ । यसले समाजका अशक्त र अपहेलित बृद्धबृद्धाहरुलाई ठूलो राहत दिइरहेको छ । यो कार्यक्रम शुरु गर्दा यसलाई राज्यले धान्न नसक्ने अति वितरणमुखी भएको आरोप लगाउनेहरुले समेत यसलाई रोक्न सकेनन्, निरन्तरता दिन बाध्य भए । राज्यको चरित्रलाई लोककल्याणकारी र जनमुखी बनाउने हो भने हरेक राजनीतिकर्मीले स्वर्गीय अधिकारीबाट सिक्न सक्नुपर्छ, प्रेरणा लिनुपर्छ ।
स्व. अधिकारीलाई ग्रामीण विकासमुखी अवधारणाका सफल प्रयोगकर्ता मान्न सकिन्छ । सात सालअघि र त्यसपछि पनि गाउँको विकासका धेरै कुरा भए । तर त्यसअनुरुप काम भएनन् । अधिकारीले अर्थमन्त्री हुँदा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउ“’ कार्यक्रममार्फत् ग्रामीण तहसम्म पुग्ने गरी पहिलो पटक बजेट विनियोजन गर्नुभयो । जनतालाई विकासमा सहभागी गराउनका लागि ग्रामीण तहसम्म बजेट दिने परम्पराको थालनी उहाँ अर्थमन्त्री भएपछि नै भएको हो । गाउँको विकासविना मुलुकको विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा उहाँले गहिरोढंगले बुझ्नु भएको थियो । नेपालको इतिहासमा अवसर पाएर पनि धेरै मन्त्रीहरुले काम गर्न नसकेका उदाहरण थुप्रै छन् । तर अधिकारी नै यस्तो पात्र बन्नुभयो, जो आफू मात्र सफल बन्नुभएन, अल्पमतको सरकार नौ महिनामै ढले पनि जनतामा ठूलो प्रभाव छोड्न सक्नुभयो ।
नेपालको संविधानले समाजवादी राज्यको अवधारणा स्वीकार गर्दै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने लक्ष निर्धारण गरेको छ । तर हाम्रो समाजवादको मोडेल वा प्रारुप कस्तो हुने बारेमा ठूलो अलमल छ । न त यस सम्बन्धी गतिलो बहस नै हुन सकेको छ । यो बेला भरतमोहन अधिकारीले गरेका उदाहरणीय कामहरुबाट सिक्न र प्रेरणा लिन सक्नुपर्छ । विचार र निष्ठाको राजनीति ओरालो लागिरहेको अहिलेको अवस्थामा नाराले मात्रै समृद्ध नेपाल बन्ने छैन । यसका लागि सद्चरित्र र इमानदारिताको खाँचो पर्छ । स्व. भरतमोहन अधिकारीमा पदमा नरहेको र बिरामी भएको अवस्थामा समेत उहाँमा राष्ट्र र जनताप्रति ठूलो चिन्ता र जिम्मेवारीबोध थियो । उहाँले विभिन्न लेखहरुमार्फत् सरकार, नेताहरु, कार्यकर्ताहरुलाई एकताबद्ध भएर इमानदारितापूर्वक लाग्न घचघच्याइरहनु हुन्थ्यो । जिम्मेवारी पाएको बेला इमानदारितापूर्वक काम गर्ने र जिम्मेवारी नलिएको बेलामा समेत पथप्रदर्शक र उत्पे्ररकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्व. अधिकारीका गुणबाट सबैले प्रेरणा लिन सक्नुपर्छ ।
स्व. अधिकारीले नेपाली समाज, राजनीति र अर्थनीतिको क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव छोडेर संसार छोड्नु भएको छ । यस अर्थमा उहाँको जीवन सफल र सार्थक बनेको छ । उहाँले आजीवन निष्ठाको राजनीति गर्नुभयो । कहिल्यै विचलित र थकित हुनुभएन । एक अथक योद्धाका रुपमा आफ्नो जीवन राष्ट्र र जनताको हितमा समर्पित गर्नुभएका उहाँप्रति हाम्रो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली !
Previous: सरकारी आयोजनामा चरम बेथिति
Next: विद्यालयले अध्ययन गर्ने विद्यालय बालविकास